RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha June ee Premier League oo lagu dhawaaqay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
July 10, 2020 at 14:08 RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha June ee Premier League oo lagu dhawaaqay2020-07-10T14:08:49+02:00 CAYAARAHA
(England) 10 Luulyo 2020. Waxaa shaaca laga qaaday xiddiga iyo sidoo kale macalinka ku guuleystay abaal-marinta kan ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii lasoo dhaafay ee June.
Sida lagu xusay bogga rasmiga ah Twitter-ka ee horyaalka Premier League Khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Premier League ee bishii la soo dhaafay ee June.
Bruno Fernandes ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah tan iyo markii uu yimid kooxda Manchester United, taasoo ka dhigtay in loo caleemo saaro abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii lasoo dhaafay ee June, kaddib markii uu dhaliyay 4 gool, wuxuuna sidoo kale ka caawiyay gool saaxiibadiis Red Devils.
Bruno Fernandes ayaa markii labaad oo isku xigta ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu fiicn bisha ee horyaalka Premier League, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka tirsan kooxda Man United ee sidaas sameeya markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2006-dii, kaddib markii uu sidaas sameeyay Cristiano Ronaldo.
Laacibka reer Portugal ayaa abaal-marintan ku garaacay xiddigaha kala ah, Conor Coady, Raul Jimenez, Danny Ings, Saint-Maximin iyo Anthony Martial.
Halka tababaraha kooxda Wolverhampton ee Nuno Espírito Santo uu ku guuleystay abaal-marinta tababarihii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii lasoo dhaafay ee June, kaddib 5 kulan uu hoggaamiyay kooxdiisa wuxuu guul gaaray 4 ka mid ah, wuxuuna barbaro galay 1 kulan, halka kooxdiisa ay dhalisay 7 gool, waxaana laga dhaliyay 1 gool, halka shabaqooda oo nadiif ah ay ilaashadeen saddex kulan.
« US hails Taiwan-Somaliland deal opening fresh battle with China
Sicir barar ba’an oo ku dhuftay Puntland »